On kosi hurumende memurume pachigaro chamambo yakanga chaizvo kufurirwa kumukira Decembrists. The chikuru mirayiridzo mudzimba wokuti Nicholas 1, kazhinji kacho vaiumba pakurwisa kuratidzwa zvose dzakakurumbira Kusagutsikana.
Pamusoro kuzvitutumadza vavakezve hurumende utariri hurongwa, Mambo kukosha kuda pachavo kuumbwa Office. Umbwa naAlexander 1 kuti funga kukumbira, rakachengetedzwa akawedzera zvikuru sezvo mutongi mutsva. Saka, dzomunyika Politika Nikolaya 1 yakatanga kugadzwa mukuru muviri muhurumende. The Office akazoonana rakakamurwa nemapazi mashanu. The mapurisa epachivande (Third Division) awana inokosha. Akaenda naye Count Benkendorf.
Domestic Politika Nikolaya 1 uyewo mwoyo uye mitemo, mitemo yaiva vakachengeteswa bazi Office wechipiri, uye ipapo akavatungamirira kuna MM Speransky. Muna 1830, mambo Aimiririrwa wenguva 45 mavhoriyumu muunganidzwa vose Mitemo yeRussian Empire kubva 1649. 15-languid "Code mitemo" pashure pemakore matatu Russia wakabudiswa. Akatumwa hurumende masangano ose, uyewo apinda vakasununguka musika. The Emperor akafunga kuti zvino mumwe nomumwe aigona kutungamirirwa nemurairo zvavo mabasa.
In Russia munguva yaitonga Nicholas 1 railroads dzakavakwa. Saka, akanga akazarurwa muna 1837 yokutanga (Tsarskoye tiiviste) pakati Tsarskoye tiiviste uye St. Petersburg. Wokutanga njanji pakati Moscow uye St. Petersburg (Mykolaiv) akazviratidza muna 1851.
Domestic Politika Nikolaya 1 akabata murimi mudiki mubvunzo. Kubvira kwake, Kesari haana kamwe nezvezvaiitika kusunungurwa vanhuwo zvavo. Zvisinei, gare gare, akasvika pakugumisa kuti Russia iri abolition kuti serfdom kunogona kuva chinhu chakaipa kwazvo. Paitonga mumatare gumi chakavanzika vakasikwa pakubata serfs. Zvisarudzo Hurumende kwave akwanise ne mamiriro ezvinhu panguva serfs. Asi kupfuura zvose zvakanga zvaitwa kuti mamiriyoni 9 ehurumende vanhuwo zvavo.
Domestic Politika Nikolaya 1 mune chitendero, rwokubudisa nhau uye dzidzo kwave zvakaenzana kuchinja. Muna 1826 kusenza mutemo rakagamuchirwa wehurumende, iyo zvachose zvinodiwa akuteerere zvaidiwa yetsika nemitemo, uyewo tsika dzechitendero. 1828 pakataurwa kuchinja zvinhu unyanzvi yechipiri dzidzo uye ezasi. Muna 1832 S. S. Uvarov akava mushumiri dzidzo. Iye ndohwaJehovha yakakurumbira payakavakirwa "Autocracy, norudzi uye Orthodoxy", akasika zvinopesana French echimurenga manzwiro, izvo zvaibva mazano wakanyatsojeka, rusununguko uye Fraternity.
Aitungamirira basa Russian Empire akatanga kuridza munyaya European pashure pokukundwa mauto Napoleon raMwari. Zvinofanira kucherechedzwa kuti kusvikira 50s remakore rechi19 wokuRussia wehurumende ane zvose kunyika Europe norugare. Zvisinei, kumaodzanyemba-rokumabvazuva nharaunda, riri pamuganhu hweOttoman Empire, zvinhu zviri zvishoma kuipa.
Kazhinji, vatorwa uye mudzimba Politika Nikolaya 1, maererano vamwe vanyori venhau, haana kubudirira kutendeuka zvakasiyana. Pakazopera kwake ushe, mambo aiva kuoma iri bhodhi iri hurumende. Pasinei simba rake guru, aisagona kutsungirira kusaita zvinhu nomazvo uye uori vakuru. Panyaya iyi, asi muboka revatungamiriri haana kuvimba kambani, kuzvidzora kumusoro waiva basa, pasinei nokuedza yaKesari. Yakanga zvikuru nokukundikana nemauto amambo. Pashure porufu rwake, paiva mubvunzo kuti nokukurira backwardness yeRussian Empire kubva vaitungamirira nyika. Izvi zvinogona kuitwa chete pachishandiswa pakuigadzirisa nyika kuchinja.
The First World War: vakuru veuto. Generals navatungamiri pakati World War First
Edward VI: Biography wamambo England
Kutsigira muPskov: nzira ruvengo uye migumisiro
Kukakavara - iri mhuri daka
8th vamabhiza Division weSS "Florian Geyer": pakusikwa, nhoroondo uye vehondo
Dzheyms e awana, kudya zvemo
Dzhessi Metkalf: Biography, Filmography uye upenyu pachavo pamusoro mutambi
Ndezvipi zvirwere zvinogona kukonzerwa bhanhire marwadzo pasi mbabvu.
Spacer "nyeredzi" yekusimbisa: zviyero, chinangwa
Cinema "Luxor World", Cheboksary, anokoka vanoda firimu
Evening remba kuburikidza guru
Tattoos uye zvaanoreva: kuzvitema "Rose"
Terminal mabhokisi - inodiwa che simba hurongwa
How vashongedze imwe nzvimbo rekuberekwa? Mwana 2 makore 5.10 makore: kamuri yakanaka pazuva rokuberekwa
Miti marozari. Gadzira runako nemaoko avo
How kubika chingwa chinobva yose hwakatsetseka negorosi muchoto?
Localhost Denwer - description, kugadzwa, troubleshooting
How kubika mupunga ari microwave?